28-ka Abriil Apple waxay ku dhawaaqi doontaa xisaabteeda rubuca 2-aad ee 2021 | Waxaan ka socdaa mac
28-ka Abriil Apple waxay ku dhawaaqi doontaa xisaabteeda rubuca 2-aad ee 2021
Haddii aad rabto inaad aragto sida Apple u jabiyo diiwaanada marka loo eego shirkadaha kale ee qaybta, waad leedahay ballan soo socota Abriil 28 dhacdo muuqaal ah oo shirkaddu ku dhawaaqi doonto natiijooyinka maaliyadeed ee rubucii u dambeeyay. Waxaan u maleyneynaa inay ku laaban doonaan si ay u muujiyaan faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka sidii dhacday sanadkii la soo dhaafay oo dhan, iyagoo ka mid ah shirkadaha tirada yar ee ku guuleystey heerkan bartamihii faafidda.
Iyada oo loo marayo dhacdo la taaban karo, Apple ayaa sii deyn doonta dakhligeeda iyo tirooyinka macaashka Abriil 28 markay tahay 14:00 pm (Waqtiga Baasifigga). Waxaan u maleyneynaa in Apple ay markale ku dhawaaqi doonto in shirkadu ay soo saartay faa'iido marka ku dhowaad qofna uusan ku guuleysan inuu sidaas sameeyo. Intaas oo kaliya maahan, waxaan u maleyneynaa inay sidaas dhihi doonaan Apple weli waa shirkadda koowaad iyo inay ku socoto wadadii ay ku noqon laheyd shirkada kaliya seddex tiriliyan doolar.
Waad raaci kartaa natiijooyinka ka socda boggan adoo maanka ku haya inay ugu fiican tahay waayo-aragnimada iPhone, iPad ama iPod Touch adoo adeegsanaya Safari iOS 10 ama ka dib. Mac isticmaalaya Safari macOS Sierra 10.12 ama ka dib. PC leh Windows 10 iyo Microsoft Edge. MSE, H.264, iyo AAC ayaa loo baahan yahay.
Dhamaadka Janaayo, Shirkadda ayaa ku dhawaaqday natiijooyinka rubucii ugu dambeeyay, taas oo ah, illaa bartamaha Diseembar. Gudaha shirkadda dhigay rikoodh cusub oo dhan oo leh 111.400 milyan oo doolar, 21 boqolkiiba ka badan tii sanadkii hore, iyo dakhliga soo gala saddexdii biloodba mar ee saamiga ah 1,68 doolar, taas oo ka dhigan koritaanka 35 boqolkiiba. 64 boqolkiiba iibka seddexdii biloodba mar ayaa laga sameeyaa Apple meel ka baxsan Mareykanka. PDF-ga oo dhameystiran wax walbana la kashifay maalintaas waxaad ka heli kartaa halkan.
Waan arki doonaa haddii tirooyinkan la dhaafay. In kasta oo aan qalab cusub la soo bandhigin, waxaan haysannaa waqtigii boqorrada u dhexeeyey. Waxaan u qaadaneynaa inay tani saameyn ku yeelan doonto shirkadda iyo tirooyinkeeda si wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » 28-ka Abriil Apple waxay ku dhawaaqi doontaa xisaabteeda rubuca 2-aad ee 2021
Ian Gomez ayaa ku biiraya kooxda jilayaasha ee Apple TV + taxane cusub "Physical"
Zennen Clifton wuxuu ku biirayaa Apple TV + isagoo ah hal abuur fulineed.